Linux komputa idiki kwazvo inokwana pabhizinesi kadhi | Linux Vakapindwa muropa
Iyo diki Linux komputa ndeiyi uye inokwana pabhizinesi kadhi
Patinofunga nezve a diki Linux komputa, Ndinofunga Raspberry Pi inouya mupfungwa kune vazhinji vedu. Chaizvoizvo, izvo iyo rasipiberi kambani inotipa isu ibhodhi, uye nayo tinogona kugadzira mini komputa ine anoshanda masisitimu senge Raspbian, Chrome OS o webOS. Asi pane chimwe chinhu chidiki here chatinogona kumhanyisa Linux pairi? Hongu, chimwe chinhu chidiki zvekuti chinokwana muhomwe yako.
Ehezve, chero munhu asati afara isu tinofanirwa kutsanangura zvandiri kutaura nezvazvo. Zviri chaizvo iro bhizinesi kadhi yeakadzika midzi mainjiniya akadanwa George Hillard, uyo anoshandisa yakawanda yenguva yake kutsvaga zvinhu zvaangaite. Chimwe chezvinhu izvi chakakonzera komputa inokwanisa kumhanya neLinux, asi imwe iine zvikwanisiro zvakakomba izvo zvisina kukodzera pamabasa mazhinji.
1 Iyo Linux komputa, hongu, asi yakaganhurirwa
2 ... asi haisi kutengeswa
Iyo Linux komputa, hongu, asi yakaganhurirwa
Achifunga nezve bhizinesi rake, Hilliard akaona kuti mamwe maprosesa akadhura zvekuti vanogona kupihwa, saka akawana zano rekuti sanganisa zvese pane rako bhizinesi kadhi uye mhedzisiro ndizvo zvaunoona mumifananidzo.
Chimwe chezvinhu izvi chakachipa makomputa anokwanisa-eLinux, zvakachipa zvirinani. Saka ndakatanga kudhira mukati megomba rakadzika kwazvo revashandisi verima. Ndakafunga ndega kuti: "ma processor aya anenge akadhura zvakakwana kuti uvape." Mushure mechinguva, ndakawana zano rekugadzira yekutanga Linux bhodhi mubhizinesi kadhi fomu chinhu.
Chigadzirwa chekupedzisira ndeye minimalist ARM komputa iyo shandisa wega Linux firmware yakavakwa na Buildroot. Iyo ine USB yekubatanidza mune imwe kona, uye kana tikabatanidza iyo nekombuta, Hillian anoti inotanga mumasekonzi matanhatu uye inoratidza iyo USB semotokari inobviswa, zvinoreva kuti tinogona kuishandisa sependrive.
... asi haisi kutengeswa
Chinhu chinonyanya kushamisa ndechekuti komputa yeLinux iyi inoshanda chete chip 8MB: iyo bootloader inotakura mu256kbs, iyo kernel mu1.6mb uye iyo yekushandisa inokwana mu2.4MB. Iyo Mutengo wekadhi iri pasi pe € 3, saka iri kadhi rebhizinesi rinozadzisa basa raro zvakakwana: kune rumwe rutivi, rinowedzera ruzivo rwekuonana uye, kune rumwe rutivi, tichava nemuenzaniso wedu pane izvo injiniya anokwanisa kuita. Izvo hazvisi zvekutengesa, uye musiki waro anoti «Kana iwe ukawana kadhi kubva kwandiri, ndine chokwadi kuti ndiri kuedza kukufadza«. Ini ndinofunga anozozviita neese dhirivhari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo diki Linux komputa ndeiyi uye inokwana pabhizinesi kadhi
Kusatenda pane yako chikamu kuti utaure kuti ivo vanozvitenda kunge iri muGigas, iri iyo yakadzamidzirwa system.
Mufaro uye pamwe zvakanaka kuti uverenge chimwe chinhu usati waisa chero chinhu.
GNU / Linux. "Linux" haisi sisitimu inoshanda.
"GNU / Linux. "Linux" haisi sisitimu inoshanda. "
Ha Izvo zvine hungwaru sekutaura kuti "Windows" haisi iyo inoshanda sisitimu kana. Ndiyo "Microsoft Windows." Ngatione kuti vangani vanokudana kudaro? Ndapota. Ndiko "kumesa umhutu uye kumedza ngamera."
Kwechina kwezana ramakore zvakanzi "Linux." Kuidaidza iyo GNU / Linux HAPANA kumbobatwa. Uye kuomerera pane izvozvi, iko kungodzokororazve.
Linux haisi sisitimu inoshanda, inoshanda chete senge inoshanda sisitimu
-Iyo majee 2019
Ehe, iyo OS inokwana mu3 megabytes. Handifungi kuti imhosva. Iwe unongofanirwa kufunga nezve chero yekare rauta ine zvishoma zvishoma, zvimwe zvazvino, zvinoshanda neizvozvo uye nepashoma.
Iwe unoda here kubatana kune imwe komputa kuti ushande?
Hannibal Talingo akadaro
Pamusoroi munyori, asi mune makore mangani ???
Muna 2001, paPC yangu yekumba, pane nyowani nyowani 800 Mb disk, (Hungu, kwete maGigabytes) ndaive nezvikamu zvina, kwaimhanya: Redhat 4, Windows 5.2, Corel Linux uye Windows NT Workstation (une zvaunoziva? Izvo zvinokwanisika kugadzira OS ine aya maitiro mune yakadzamirwa sisitimu. Nenzira, PC yangu yakamhanya ine simba 98 Mb ye RAM.
Pindura Aníbal Talingo
Kuverenga foto nesoftware yemahara. Kutanga kushandisa nzira